La Cuerda Apk Download Ho an'ny Android [Vaovao 2022 Fanavaozana] | APKOLL
La Cuerda Apk Download Ho an'ny Android [Fanavaozana 2022 Vaovao]
Ny gitara dia iray amin'ireo fitaovana mozika tsara indrindra nilalao, saingy satria mahagaga dia sarotra koa ny mianatra. Noho izany, eto izahay miaraka amin'ity rindranasa Android mahavariana ity, izay ahafahanao mianatra chord isan-karazany samy hafa amin'ny fomba samihafa. Ity fampiharana ity dia fantatra amin'ny anarana hoe La Cuerda Apk.
Araka ny fantatrao, ny gitara dia novolavolaina tamin'ny faramparan'ny faha-19 tany Espaina. Misy fifandraisana sy tantara lava eo amin'ireo roa ireo. Espaina dia manolotra ny sasany amin'ireo mpitendry gitara tsara indrindra hatramin'ny voalohany. Azonao atao ny mahita ny sasany amin'ireo mozika izay avy any Espaina ihany koa.
Ny fividianana zavamaneno rehetra dia mora kokoa noho ny milalao azy. Afaka mividy zavamaneno amin'ny dolara vitsivitsy ianao, saingy tsy afaka mividy ny talenta na ny fahaiza-milalao azy ianao. Sarotra koa ny mahita mpampianatra mahay, izay afaka mampianatra anao amin’ny fomba mety.
Ka eto izahay miaraka amin'ny fampiharana Android tsara indrindra La Cuerda App, izay ahafahanao mianatra ny momba ny gitara. Misy lafin-javatra maro kokoa amin'ity rindranasa ity, izay hozarainay aminareo rehetra. Raha hampiasa an'ity rindranasa ity ianao dia tokony hijanona miaraka aminay mandritra ny fotoana kelikely hahalala momba azy alohan'ny hampiasana azy.
Topimaso momba ny La Cuerda Apk
Izy io dia fampiharana Android, izay manolotra anao hianatra ny fomba rehetra hitendry gitara. Manolotra fitambarana kordônaly sy kiheba taonina izy. Manolotra hira an-taonina avy amin'ny lafivalon'izao tontolo izao koa izy io, ahafahanao miditra sy mamonjy azy ireo.
Manamora kokoa anao izany amin'ny filazana ny kisary momba ny akora. Manolotra kilasy video ihany koa izy io, izay ahafahanao mianatra amin'ireo mpampianatra tsara indrindra. Azo tehirizina ao amin'ny fitaovanao ny horonan-tsary ary azonao jerena imbetsaka izy ireo.
La Cuerda App dia manome serivisy ivelan'ny Internet, izay midika fa rehefa nametraka ny zavatra takiana rehetra ianao. Tsy mila karazana serivisy amin'ny Internet ianao raha hampiasa ity rindranasa ity. Azonao atao ny mandefa ity rindranasa ity fotsiny na dia amin'ny làlan'ny sidina aza, izay tsy misy olona manelingelina anao mandritra ny fampiharana.
Ny olana tokana azonao atrehana dia ny fiteny. Ny kinova ankehitriny dia tsy manolotra afa-tsy ny Espaniôla, izay mora takarina amin'ireo izay mahalala momba an'io fiteny io. Saingy sarotra ho an'ny mpampiasa fiteny hafa izany. Noho ny fifandraisana amin'ny mpampiasa sariaka dia azonao mora foana izany.
Araka ny fantatrao fa afaka mianatra amin'ny alàlan'ny chords ianao, noho izany raha tsy azonao ilay fiteny. Azonao atao ny manamarina ireo sary, izay tena tsotra ampiasaina sy takatra. Izy io koa dia manome horonan-taratasy mandeha ho azy, izay tsy mila ampiasainao ny tananao hanovana ilay pejy.
Azonao atao ny mahatakatra fa tsy maimaimpoana ny fidirana amin'ireo endri-javatra marobe ireo. Raha mieritreritra toy izany ianao dia marina ny anao momba izany. Tsy manome maimaim-poana ireo fiasa rehetra ireo, fa tsy mila mandoa dolara an-jatony ianao. Mila mandoa $ 1.91 fotsiny ianao ary hanana fidirana mandritra ny androm-piainana.
anarana LaCuerda PRO
Anaran'ny fonosana com.redenes.lacuerda & hl = en
Endri-javatra manan-danja amin'ny La Cuerda Pro App
Niezaka izahay nizara saika ny momba an'ity rindranasa ity, izay manolotra ity fampiharana ity. Fa raha heverinao fa malahelo ny sasany amin'izy ireo izahay dia azonao zaraina aminay ihany koa amin'ny alàlan'ny fizarana fanehoan-kevitra. Ao amin'ny lisitra eto ambany no hizarantsika ny sasany amin'ireo endri-javatra lehibe an'ity fampiharana ity
Rafitra fandoavam-bola indray mandeha
Kisary Chords hanome vaovao mahomby kokoa
Mora ampiasaina sy takatra
Ampio ny lisitr'ireo chords vaovao
Ahoana ny fampidinana ny La Cuerda Apk?
Raha te-hisintona an'ity fampiharana ity ianao dia afaka mitsidika ny Google Play Store. Fa raha te-hisintona avy amin'ity pejy ity ianao dia mila tsindrio fotsiny ny bokotra fampidinana. Ny bokotra fampidinana dia eo an-tampon'ny sy ity pejy ity. Kitiho eo izany ary miandry segondra vitsy, manomboka ho azy ny fisintomana.
La Cuerda Apk 2021 no rindrambaiko tsara indrindra, izay manome ny vidiny mora indrindra hanomezana endrika tsara indrindra. Afaka mianatra fomba isan-karazany ianao amin'ny fitendrena gitara sy hanaitra ny namanao sy ny fianakavianao. Noho izany, tsindrio fotsiny ny bokotra fampidinana ary manomboka milalao. Tsy ho ela ianao dia ho mpilalao gitara tsara.
Ho an'ny fampiharana mahatalanjona kokoa dia mitsidika hatrany ny anay Website.
Sokajy Apps Tags La Cuerda Apk, La Cuerda Pro Apk Post Fikarohana
MavAnime Apk Download Ho an'ny Android [2022 All Movies]